गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो समय चोरीका घटना दिनप्रति दिन बढ्दै - Ruru FM
गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो समय चोरीका घटना दिनप्रति दिन बढिरहेको छ । तर जिल्ला सदरमुकाम तम्घास बजारमा जडान गरिएका सि.सि. टी. क्यामराको निगरानी को काम भने नाम मात्रैको भएको छ । जसले गर्दा सदरमुकामबाटै सवारीसाधानहरु चोरी हुने क्रम बढने गरेका छन् ।
जिल्लामा दिनप्रति दिन चोरीका घटना बढिरहेको समयमा सुरक्षा निकायले चोरीका घटना न्यूनिकरण गर्न जडन गरिएका सि.सि. टी. क्यामराको निगरानीमा चासो दिइएको पाइएको छैन् । जिल्लामा चोरीका घटना हेर्दा सदरमुकाम तम्घास बजारबाट एउटा स्कुटर र बोलेरो जिप हरायो । रुरुक्षेत्र गाउँँपालिकामा वडा नम्वर ६ रिमुवाको वडा कार्यालय तोडफोड गरि नगद चोरी भएको भयो । वडा कार्यलयको टेवलको लकरमा रहेको नगद पाँच हजार र दराजमा रहेको नगद ६० हजार गरी कुल ६५ हजार चोरी भयो । यस्तै सोही वडाको बिष्णुबहादुर सिंजालीको होटलको ढोका फोडी नगद ६ हजार ,बिष्णु पौडेलको घरको ताल्चा फोडी कोठा भित्रको दराजमा रहेको नगद ४० हजार , ५ तोला बराबरको सुनका गहना, ४ तोला बराबरको चाँदीको पाउजु चोरी भएको छ ।
यस्तै सोही वडाकै गणेश पौडेलको संगम होटलको ताल्चा फोडी नगद नौ हजार ,नवराज बस्नेतको घरको ताल्चा फोडी नगद ५५ हजार , मधु पछाइको किराना पसलबाट नगद ६ हजार र पैँचो पसलको नगद आठ सय चोरी भएको छ । यस्तै मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय ३ पटक सम्म तोडफोड गरी नगद तथा जिन्सी सामग्री चोरी भयो । तर अहिले सम्म कसले चोरी गयो भनेर पत्ता लगेको छैन् । दिनप्रति दिन जिल्लामा चोरीका घटना बढिरहेकोले गाउँघर देखी सदरमुकामका मान्छेहरु त्रसित छन् ।
जिल्लामा चोरीका घटना बढिरहेको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रशासनको तर्फबाट न्यूनीकरण गर्न काम भइरहेको बताउनुभयो । सुरक्षा निकायको बैठक बसि स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गरी सि.सि.टि क्यामराको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा स्थानीय सरकार संग सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
चोरीका घटना दिनप्रति दिन बढिकोले घटना बारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोतम पाण्डेले बताउनुभयो । चोरी कसले गयो भनेर अझै नखुलेको उहाँले बताउनुभयो । तर अहिले चोरीका घटना बढिरहेकोले सिविल प्रहरी जिल्लामा खटाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पाण्डेले बताउनुभयो ।
कुनै अपरिचित व्यक्ति तथा नचिनेको व्यक्ति गाउँघरमा आएमा कुनै आशंका लागेका प्रहरीलाई खबर गर्ने हो भने चोरीका घटना न्यूनिकरण हुने गर्दछ ।